फिल्म छायांकनलाई अनुमति दिने सरकारको तयारी, केही दिनमै औपचारिक निर्णय हुने – Nepal Press
फिल्म छायांकनलाई अनुमति दिने सरकारको तयारी, केही दिनमै औपचारिक निर्णय हुने
हल खुलाउनेबारे सीसीएमसीले निर्णय गर्ने
२०७८ साउन ५ गते १६:४९
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक दूरीको मापदण्ड पालना गर्दै फिल्म छायांकनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । संचार मन्त्रालयसँग यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको र केही दिनमै औपचारिकरुपमा अनुमति दिने तयारी रहेको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ ।
कसरी गर्ने तयारी छ सुटिङ ?
सिनेमा हल कहिले खुल्नेछ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिड संक्रमण दर १० प्रतिशत झरेमात्र फिल्म हल खुलाइने भएको छ । अहिले संक्रमण दर २१ प्रतिशत छ । काठमाडौंका प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार १० प्रतिशतमा संक्रमण नझरेसम्म भीडभाड हुने थलो खुलाइनेछैन ।
प्रकाशित: २०७८ साउन ५ गते १६:४९